अन्ततः गौतम दलबलसहित फर्किए एमालेमै , माधब नेपाललाई नमिठो धक्का ! – Points Nepal
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २९, २०७८ समय: ११:५१:३९
नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र सदस्य एमाले निकट मूल संगठनमै फर्किएका छन् । एमाले विभाजनलगत्तै नेपाल कर्मचारी संगठन विभाजित भएको थियो । विभाजित भएको संगठनका अध्यक्ष रेवन्त गौतमसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन गिरी र अधिकांश पदाधिकारीसहित सो संगठन नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनमा विलय भएको हो ।
अबको १५ दिन पछि यसरी कोल्टे फेर्दैछ नेपालको राजनितीले !
नेपालका प्रमुख राजनितीक दलहरुले महाधिवेशन सकाए पनि राजनितीमा देखीएको अवरोधको गाँठो सजिलै फुक्ने देखिएको छैन ।
माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदहरुलाई कारबाहीको माग गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अदालतले पेशीमा चढाउँन थालेको छ । माघ १२ अघिनै अदालतले यो बिषयमा फैसला गर्ने र राजनितीले नयाँ कोर्स लिने अनुमान
Last Updated on: January 13th, 2022 at 11:51 am